Qeybta 1: Arrimaha ku saabsan xogta laga qalabka macruufka gudbaayo telefoonada Acer
Waxaad yeelan karaan telefoonka ah Acer socda nidaamka qalliinka Phone Windows ah ama nidaamyada hawlgalka Android. Wax kasta oo aad isticmaasho, dabcan phone Acer u isticmaalaan nidaam ka duwan qalliinka sida iPhone. Si kastaba ha ahaatee, si ay u isticmaalaan qalab Android waa in aad ku leedahay xisaabta Google ah. Waxaad ku wareejin kartaa macluumaadka la xiriira xiriirada aad ka iPhone la Lugood codsiga si toos ah in aad xisaabta Google. Laakiin arrinta ugu imaado marka ay isku dayaan in aad si ay u gudbiyaan macluumaad kale oo la mid ah fariimaha. Si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah, waa in aad isticmaasho software-saddexaad. Haa, oo ay u badan tahay in aad maskaxda ku hayso agabka kala duwan si ay u gudbiyaan ka iPhone in aad telefoon Acer, sida sawiro, videos, abuse wac, codsiyada. Waa inaad had iyo qabaa in la isticmaalo qalab gaar ah wareejin karaan macluumaadka oo dhan dhib la'aan.
Qaybta 2. Easy xal: 1 click in ay xogta ka iPhone wareejiyo Acer
Haddii aad doonayso inaad isticmaasho Wondershare MobileTrans u dhexeeya noocyada phone laba wareejinta xogta, waa in aad ogaataa in iPhone ay caawinayso Wondershare Mobile Trans waa iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, iPhone 4s iyo qalabka Acer ah oo ay taageerayaan ku qalab this waa Acer LG-E400, Acer E1109_V73_GQ1002_CTP, Acer Liquid, Acer E310, E400 Acer, Acer A50, Acer E1108_V73_JBL1, Acer Liquid MT. Iyadoo qalab Wondershare MobileTrans, waxa aad awoodi kartaa in ay ku wareejin xogta aad ka iPhone in aad telefoon Acer. Xogta in loo gudbin karaa waa farriimo, xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, videos, iyo codsiyada. Sidoo kale waxaad dib kartaa ilaa aad iPhone iyo badbaadin xogta ku saabsan pc, tusaale ahaan, iyo ka dib soo celin marka aad rabto. Asal ahaan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in aad si degdeg ah loo wareejin karaa Wondershare ka taleefanka si phone kale isticmaalaya computer ah.
Waxaan tusnay in nidaamyada hawlgalka macruufka socda ee iPhone iyo nidaamyada hawlgalka Android socda ee telefoonada Acer kala duwan yihiin iyo xogta aan si habboon la wadaago ka mid ba midka kale of this laba qalab kala duwan. Tani waa sababta, halkii la isticmaalayo habab qabanqaabiyey jir, waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in xogta ka iPhone ah wareejiyo phone Acer ah.
Tallaabada 1. Samee xiriir jirka u dhexeeya aad iPhone, telefoonka Acer iyo Computer
Your iPhone iyo telefoonka Acer waxa loo dhiibaa la cable USB ah waa in aad u isticmaalaan xidhiidhka ka dhexeeya telefoonada jirka iyo your computer. Fur Wondershare MobileTrans oo guji "Start" in ay galaan taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka. Ogaado MobileTrans degdeg ah labadaba telefoonada haddii ay ku xiran yihiin, mid ka mid ah sida Source phone oo kale sida telefoonka Destination. Sidoo kale, waxaad arki kartaa mid ka mid button inuu ku dhajisan u dhexeeya labada telefoonada. Xogta aad All sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, abuse wac, barnaamijyadooda, photos, music, videos ku qoran yihiin oo aad kala dooran kartaa macluumaadka aad rabto in lagu wareejiyo. Haddii aad doonayso, waxaad nadiifin kartaa xogta ka phone Acer ka hor si ay u bilaabaan dayanayaan ah ee aad taleefan xogta cusub. Tani waa haddii aad leedahay hadda ka hor qaar xog ku saabsan telefoonka Acer iyo brand isn`ta phone cusub.
Tallaabada 2. Isticmaal Start nuqul ka badhanka si ay u gudbiyaan xogta ka iPhone in aad telefoon Acer
Dhamaan xogta waxaa lagu soo xulay si ay u wareejiyo ka iPhone in aad telefoon Acer. Haddii aad u baahan tahay oo kaliya waxyaabaha dhowr ah, waxa aad awoodi kartaa in aad doorato xogta in aad rabtid in loo soo wareejiyo. Just hubi waxyaabaha kuwa. Ka dib markii doorashada la sameeyo, waa in aad si riixdo badhanka Start Copy. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto warbixinta ka soo baxday ilaha iPhone in loo gudbin karaa si aad u socoto Acer telefoonka. Waa arrin aad u muhiim ah in aan barkinta aad iPhone iyo Acer telefoonka ka kombiyuutarka!
Qaybta 3. Poll: Waa kuwee Acer qalab aad u isticmaali?
Sida loo baadh, qari ama Block Facebook Rasuulka Messages on macruufka
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Acer Phones